FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiXhosa IsiZulu
ABANTU baseYurophu abathanda ukubukela ibhabhathane ekuthiwa ligqiyazana elimibalabala (Vanessa cardui) baye bazibuze ukuba ayaphi la mabhabhathane xa kuphela ihlobo. Ngaba ayafa xa kuqala ubusika? Uphando lwakutshanje lusichazela into eyenza umdla ngala mabhabhathane. Qho ngonyaka, la mabhabhathane aye asuke kumntla weYurophu aye eAfrika.
Abaphandi baye baqokelela iingxelo ezivela kwizixhobo ezijonga izinto ezibhabhayo kunye neyabantu abaye bawabona la mabhabhathane eYurophu. Olu phando lubonise ukuba xa kuphela ihlobo, izigidi zala mabhabhathane ziye zibhabhe ziye emzantsi, ixesha elininzi ebhabhela kwiimitha eziyi-500 phezu komhlaba, nto leyo eyenza kube nzima ukuba abantu bawabone. La mabhabhathane aye alinde umoya owalungeleyo noza kuwathwala kuhambo lwawo olude oluya eAfrika, ebhabha ngesantya esiziikhilomitha eziyi-45 ngeyure. Olu hambo luqala kumntla weArctic luyo kuphela kwiinxalenye ezikude zeNtshona Afrika, ibe lunokuba ziikhilomitha eziyi-15 000. Lo mgama uwuphinda kabini lowo uhanjwa libhabhathane elikhulu laseMntla Merika. Kufuneka izizukulwana ezintandathu zebhabhathane igqiyazana elimibalabala ukuze zigqibe imijikelo yawo.
Unjingalwazi uJane Hill weYunivesithi yaseYork, eNgilani, ucacisa athi: “La mabhabhathane akayeki ukuhamba, ukuzala nokujikeleza iindawo.” Njengoko la mabhabhathane esenza oku, aphela onke emkile eYurophu aye eAfrika aze aphinde abuye onke kwakhona.
URichard Fox, ophethe icandelo lophando kwiButterfly Conservation uthi: “Esi sidalwa sihamba amazwe ngamazwe nangona sinobunzima obungaphantsi kwegram enye nesi nobuchopho obulingana nentloko kanotaka, ibe asikwazi ukufunda nakwamanye amabhabhathane anamava.” Abantu babekade “becinga ukuba la mabhabhathane abhebhethwa nje ngumoya de ayokufa yingqele yaseBritani, kungekho themba lokuba kuya kuze kubekho amanye.” Noko ke, olu phando “lubonise ukuba Igqiyazana Elimibalabala lingumkhenkethi oyazi kakuhle indawo ayakuyo.”